Faha-20 taonan’ny tarika : Ho avy ny tapaky ny aprily izao i Tahiry -
AccueilVaovao SamihafaFaha-20 taonan’ny tarika : Ho avy ny tapaky ny aprily izao i Tahiry
Faha-20 taonan’ny tarika : Ho avy ny tapaky ny aprily izao i Tahiry
05/04/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nanana ny lazany tany amin’ny taona 2000 tany. Hankalaza ny faha-20 taonany amin’ity taona ity ny tarika Ndondolah sy Tahiry. Hiatrika izany ary ho avy ny tapak’ity volana avrily ity i Tahiry, izay miasa sy monina any ampitan-dranomasina efa ho taona maro izao. Amin’izao fotoana dia samy manomana fatratra io seho goavana etsy amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina ny talata 1 mey ho avy izao, na i Ndondolah eto an-toerana na i Tahiry. «Ao anatin’ny fanomanana tanteraka, ary vao avy niditra trano fandraisam-peo. Nisy ny fandraisana sary ary hivoaka atsy ho atsy ny rindran-tsary vaovao », araka ny fanamarihana nentin’i Tahiry. « Tsy hisy ny hira vaovao hiarahanay fa fanavaozana ireo hira teo aloha no hisy », hoy ihany izy. Miara-dia hatrany amin’i Tahiry ny fitiavana lamaody, ka hampiakanjo azy amin’io fankalazana io ilay mpampiakanjo malagasy, Tantely Rakotoarivelo.
Ankoatra azy mianadahy izay loharano nipoiran’ny tarika, dia mpanakanto maro naira-niasa sy nanodidina azy ireo no hanotrona sy hitondra ny anjara birikiny amin’ny fampisehoana. « Hiran’i Ndondolah sy Tahiry no atao miaraka amin’izy ireo, ary ho betsaka ny tolotra tsy ampoizina », hoy hatrany izy. Sambany rahateo tao anatin’izay 20 taona izay no hisedra irery ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena ity tarika ity. Aorian’io seho santatra io, dia hiezaka ny hitondra ny fankalazana ny faha-20 taona any amin’ny faritra hafa ny tarika Ndondolah sy Tahiry.
Tsy nisorona ny fanambarana izay notontosain’ ny foloalindahy omaly izay nahitana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny Jeneraly de corps d’armé Rasolofonirina Béni Xavier, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, ny Jeneraly Randrianamahavalisoa Giarad, ary teo ihany ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : “Mila tohizana ny asa efa natomboka”